ဗွီအိုအေ မြန်မာ အင်တာနက်စာမျက်နှာသစ်
ဗွီအိုအေ မြန်မာ စာမျက်နှာသစ်xဗွီအိုအေ မြန်မာ စာမျက်နှာသစ်
ဗွီအိုအေ မြန်မာ အင်တာနက် စာမျက်နှာသစ်ကို ဇူလိုင်လ (၁၇) ရက်နေ့မှာ ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းဌာန အစီအစဉ်များကို နားထောင်အားပေးကြသူ နဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ လာရောက်ကြသူ သောတရှင်များကို ဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းဌာန ဝိုင်းတော်သူ၊ ဝိုင်းတော်သားများက အထူးကျေးဖူးတင်ပါသည်။ အကြံပေး၊ ဝေဖန်စာများ ပေးပို့လိုပါက အီးမေးလ် (burmese@voanews.com) သို့မဟုတ် မြန်မာသတင်းဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာ အကြံပြုလွှာမှတဆင့် လွတ်လပ်စွာ ရေးပို့နိုင်ပါသည်။
This forum has been closed. Comment SortingLatest FirstChronological Comments page 123 of3ရှေ့ သို့ by: အောင်နိူင်ထွန်း from: မိတ္ထီလာ 13.08.2012 12:30 Report မြန်မာပြည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကို သမ္မတကြီး သိရှိစေရန် တိုင်ကြားချင်ပါသည်။မည်သည့် ဆိုက်(ဒ်)ကိုဝင်ရမည်မသိလို့ပြောပြပေးချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အောင်နိူင်ထွန်း Report Reason * Please enter the code shown on the image by: မောင်လူလှ from: ရန်ကုန်တိုင်းဒေါပုံမြို. 12.08.2012 02:49 Report သမ္မတပြောခဲ့သည့်စကားအရ..နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဘူးဆိုတာကိုဆွေးနွေးပါရစေဗျာ..ရှေ့ဆက်တိုးဖို့အစီစဉ်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကသမ္မတကိုမျှော်လင့်ထားကြတယ်လေ..နိုင်ငံကိုတိုးတက်ဖို့တည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့...တစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်..ကြောင်ကြာကြာရေမငုတ်ပါဘူးတဲ့..အဏမို့ဟန်ရေးပြတာပါလို့လည်းအချို့ကပြောကြတယ.်ဒီတော့ကြောင်လားကြားလားဆိုတာကို.သိစေဖို့နိုင်ငံဝန်ကိုတာထမမ်းဆောင်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ....... Report Reason * Please enter the code shown on the image by: ကျော်စွာထိုက် from: မန္တလေး 11.08.2012 12:11 Report အပြင်အဆင်တွေအရမ်းကောင်းပါသည်၊ရေဒီယိုကတော့နေ့စဉ်နားထောင်ပါသည်၊အစီအစဉ်များလည်းကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေကအမြဲတန်းဝန်ထမ်းလားသိလိုပါသည်။ Report Reason * Please enter the code shown on the image by: မင်းနိုင်အောင် from: ခေတ္တဂျပန် 10.08.2012 13:36 Report VOA ကို ကျွန်တော်ငယ်ငယ် စွဲလန်းခဲ့ပါတယ် ။ဒါပေမယ့်၇ခိုင်ကိစ္စမှာ ခင်ဗျားတို့သတင်းတင်ဆက်မှုက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာကိုထိပါးစော်ကားလာတာ လွန်းသွားပါပြီး ။မြန်မာပြည်မှာ၇ှိတဲ့ ပညာတတ်လူငယ်အများစုက ခင်ဗျားတို့ကိုအယုံကြည်မ၇ှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ် ။မြန်မာပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆို၇င် မြန်မာလူမျိုး၇ဲ့ဆန္ဒကိုသိအောင်လုပ်ပါ။နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး ကို့ဘာသာသာသနာကို ကုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးဖို့ကြံစည်တာ ၇င်နာတယ်ဗျာ။ခင်ဗျာတို့သိသလောက်တတ်သလောက်ပညာတွေ ငါတို့မြန်မာပြည်တွင်းကတိုင်း၇င်းသားတွေလဲ နားလည်ပါတယ်။ကျွန်စီတ်မမွေးကြပါနဲ့ မြန်မာသွေးမစစ်သူတို့ေ၇...လု့အခွင့်ေ၇းကိုအောကာင်းပြပြီးကျွန်တော်တို့ မြန်မာအမျိုးသားအကျိုးစိးပွားနဲ့ Report Reason * Please enter the code shown on the image by: Min Min 09.08.2012 08:55 Report သတင်းသုံးသပ်ချက်။ဆွေးနွေးခန်းတို့အတွက် internet စာမျက်နှာတွင် blog ကဲံသို့ Comment ရေးရန်ဖွင့်ပေးဝင့်ပါသည်။စာဖတ်သူများ၏တုန့်ပြန်ချက်များ၊ဖြည့်စွက်ချက်များလက်ခံသင့်ပါသည်။ Report Reason * Please enter the code shown on the image by: ဌေးဝင်းအောင် from: ရန်ကုန် 06.08.2012 17:12 Report လူမှုကူညီရေးကဏ္ဍလေးတိုးချဲ.ထုတ်လွှင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Report Reason * Please enter the code shown on the image by: HTAY HTAY 06.08.2012 13:31 Report VOA ရှင်.တစ်ပတ်စာအတွက်အသံဖိုင် သတင်းတွေကိုဘယ်မှာ ကြည်.ရမလဲ ရှင်. Report Reason * Please enter the code shown on the image by: Hlaing,U from: USA 04.08.2012 01:01 Report ဗီအိုအေ ခင်ဗျား ၁။ဦးစွာ မြန်မာစာတွေ ပုံမှန်ပေါ်လာပြီမို့ ဝမ်းသာခြင်း ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်မိ ပါ ကြောင်း ပြောပါရစေ။ ၂။ အသစ်ထွက်လာမည့်O/S Windows 8 ၏၊ ရှေ့ပြေး w8 (consumer preview) အသုံး ပြု ကွန်ပျူတာနှင့်၊လက်ကိုင်ဖုန်း Samsung Galaxy SIII (Android phone) ၌ အမြစ်မတူး (unroot)မတူးရဘဲနှင့်၊ လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မာစာများကိုဖတ်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရပါသဖြင့် ဝမ်းသာလျက် အသိပေးအပ်ပါသည်။ အချို့သောစာလုံး (တစ်လုံးစ။နှစ်လုံးစ)တော့ လက်ကိုင်ဖုန်း၏စာမျက်များ၌ ရှေ့နောက်ဖြစ်လျက်နေပါသေးသည်။ ၄။မှတ်ချက်။ ။ လက်ကိုင်ဖုန်းသစ်၌၊ဘီဘီစီမြန်မာစာလုံးများကတော့ လုံးလုံးမပေါ်သေးပါ။ အလားတူ ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း( Android phone)၏ FaceBook စာမျက်နှာ ၌လည်း မြန်မာစာများ ပျောက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာစာလုံးများကို ကွန်ပျူတာ၏အင်တာနက်မှာရော။ အမြစ်တူးဖေါ်(unrooted )လုပ်ဖို့မ လိုဘဲ (Android phone)လက်ကိုင်ဖုန်း ၌ပါ၊ ဖတ်ရအောင်စီစဉ် ထားသော ဗီအိုအေ ၏ လုပ်ပုံ။ လုပ်နည်းလေးကို၊ မျှဝေစေချင်ပါသည်။လေးစာခင်မင်စွာဖြင့်၊ဗီအိုအေ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး။ Report Reason * Please enter the code shown on the image by: င်ညိုအောင် from: မကွေးတိုင်ဒေသကြီး ဆိပ်ဖြူ 03.08.2012 21:08 Report မအေးသန္တာအောင်၇ဲ့ စကားပြောကြ၇အောင်အစီအစဉ်မှတရုတ်စကားကိုဘယ်လိုလေ့လာ၇မလဲဆိုတာဖြေကြားပေပါခင်ဗျာ(မှချက်-မြန်မာဘာသာပြန်ဖြင့်)လေးစားစွာဖြင့် ခေတ္တမလေးရှား Report Reason * Please enter the code shown on the image by: natyakam from: kyauktan T-S 03.08.2012 20:52 Report အင်တာနက်စာမျက်နှာသစ်မှာသတင်းတွေဖတ်ရတာယခင်နဲ့စာရင်အခုပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်-၀မ်းသာလို့-VOA ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။အမြဲအားပေးလျက်ပါ။ Report Reason * Please enter the code shown on the image Comments page 123 of3ရှေ့ သို့ စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (၁၀-၂၅-၂၀၁၄)
တပတ်အတွင်း မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းများ။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အာရှနဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးပါမှုနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို East-West Center ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Satu Limaye နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။ မကြေးမုံရဲ့  အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ နဲ့ ကမ္ဘာ့တလွှာ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများအကြောင်း သက်တံရောင်သတင်းလွှာစတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးများ ... ထိပ်တန်းသတင်းများ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားထုတ်သူကို သတ်တဲ့အမျိုးသမီး အီရန်ကွပ်မျက် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း ကွယ်လွန် ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလား အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး သေဆုံးရမှု သူတို့ အမြင် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ အီဘိုလာ အကူးစက်ခံရသူ ကန် သူနာပြုတွေ ပျောက်ကင်းပြီ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ အားထုတ်သူကို သတ်တဲ့အမျိုးသမီး အီရန်ကွပ်မျက် Harry Potter မင်းသမီးလေး Emma Watson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့မိန့်ခွန်း ဟောင်ကောင် လူထု ဆန္ဒ္ဒခံယူဖို့ စီစဉ် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ နျူကလီယား အရေး ဆွေးနွေးဖို့ ကန်လိုလားအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများJean-Claude Duvalier Mande Padon ak Rekonsilyasyon Nan Peyi Dayiti မတူတာလေးတွေ ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ စနေနေ့ တီဗွီမဂ္ဂဇင်း (၁၀-၂၅-၂၀၁၄) သက်တံရောင်သတင်းလွှာ